ရေထွက်ကုန်ထုတ်ကုန်များ ၀ ယ်လိုအားမြင့်တက်လာခြင်းနှင့်လူများ၏ ၀ င်ငွေတိုးပွားလာခြင်းတို့နှင့်အတူ, အာဖရိကရှိငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းသည်ရာစုနှစ်အစတွင်မြန်ဆန်စွာတိုးတက်ခဲ့သည်. အာဖရိကမှာ, ငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကိုရေချိုငါးမွေးမြူရေးနှင့်ကမ်းရိုးတန်းငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်. ငါးအစာဖြန့်ဖြူးစက်သည်အာဖရိကရေချိုငါးမွေးမြူရေးအတွက်ရေနေအစာထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်.
ခြောက်သွေ့သောငါးအစာထုတ်စက်, ထို့အပြင်ငါးအစာတောင့်စက်ကိုခေါ်, အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင်ငါးများအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေသတ္တဝါများအစာတောင့်များအဖြစ်ထုတ်လုပ်သည်, ငါးခူ, ပုစွန်, ဂဏန်းစသည်. နောက်ဆုံးအစာတောင့်သည်ထူးခြားသောပုံစံနှင့်အရသာကောင်းမွန်သည်, မြင့်မားသောအာဟာရနှင့်ချောမွေ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ. ငါးနှင့်ပုစွန်ကိုကျွေးမွေးသည်, အတောင့်ကို extruding သည့်အခါရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိရေပေါ်အချိန်ကို extrusion ဒီဂရီညှိခြင်းဖြင့်ချိန်ညှိနိုင်သည်. လောလောဆယ်, ရေပေါ်ငါးအစာထုတ်စက်သည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည် (ငါးခူ, တီလားပီးယား, ပုစွန်စသည်တို့) ကိုင်ဆောင်သူသို့မဟုတ်ငါးအစာကျွေးခြင်းအပြောင်းအလဲနဲ့စက်ရုံ.
ငါးခူစားငါးများနှင့်ငါးအစာများပါ ၀ င်သည်,တံငါသည်များသည်ငါးနှင့်အညီအမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းအမျိုးမျိုးကိုညှိယူနိုင်သည်.